पहिला मजदुर, अहिले रोजगारदाता – Purbibazar News
भारतमा उच्च माग हुँदा अम्लिसोको निर्यात हरेक वर्ष...
टोल सुरक्षा समन्वय समितिका लागि छलफल
निजी क्षेत्रले ३ करोड बढीको ‘बिचौलियामुक्त’ कृषि बजार...
बाढीपीडितको राहत रकम फिर्ता
आफन्तलाई जागिर, पुराना कर्मचारीलाई निष्कासन
क्याम्पस सञ्चालक समितिका छोरी र श्रीमतीलाई जागिर
विदेशमा हण्डर, स्वदेशमै आत्मनिर्भर
इटहरी लेडी जेसीज अध्यक्ष न्यौपाने अवैधानिक भएको खुलासा
Home अर्थ बजार	पहिला मजदुर, अहिले रोजगारदाता
पहिला मजदुर, अहिले रोजगारदाता
written by Purbi Bazar December 23, 2017
गरिब परिवारमा जन्मेका हुन्, नरेशकुमार माझी । उनको जीवनकालमा धेरै दुःख नभए पनि केही कठिन परिस्थिति भने आएका थिए । माझीका २ जना दाजुभाइ थिए । ४ वर्षको हुँदा उनका बुबा बितेका हुन् । बुबा नबित्दै धेरै कठिन परिस्थिति आए । र, त्यस कठिन परिस्थितिमा पनि उनकी आमाले दुःख गरिकन उनलाई हुर्काइन् । २ जना दाजुभाइलाई हुर्काउन कति कठिन भयो होला ? तर, त्यस्तो कठिन अवस्थामा पनि हार खाइनन् माझीकी आमाले ।
माझीका दाजु सुरेशकुमार माझीले भने आफ्ना भाइको हेरचाह गर्ने गर्थे । ७ कक्षामा पढ्दापढ्दै पैसा पनि कमाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले विद्युतीय काममा लागिपरेका थिए । विद्युतीय काममा केही पनि उपलब्धि नभएपछि निरन्तर पढाइमै उनी सक्रिय भए । ‘दुःख–सुख गरेर आइएसम्म पढें, तीन विषय लागेर पढ्न सकिनँ,’ उनले सुनाए ।
पढेर मात्र हुँदैन, पैसा पनि कमाउनुप¥यो भन्ने सोच बोकेर माझी काठमाडौं पुगेका थिए । सर्वप्रथम अफ्सेट प्रेसमा पसेर उनले कामको थालनी गरे । काम गर्दा सिक्नेक्रममा पहिला त्यत्तिकै काम गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै मासिक तलब थाप्ने नियम थियो । सोहीअनुरूप पहिलो तलब १ हजार ५ सय रुपैयाँ पाए माझीले । त्यहाँबाट उनले अधिकतम् तलब २ हजार ५ सय रुपैयाँ पाएका थिए ।
त्यहाँ राम्रो कमाइको कुनै अर्को उपाय नभएपछि उनी इटहरी आएका थिए । यहाँ पनि त्यत्ति राम्रो तलब–सुविधा नभएकाले उनी पीडामा थिए । यहाँबाट केही बढी तलब–सुविधा धरानमा दिने कुरा भयो । र, उनी धरान हानिए । धरानमा पनि लगभग १२–१६ घन्टासम्म काम गर्नुपर्ने थियो । समयअनुसारको घरखर्च चल्ने तलब धरानमा पनि थिएन ।
‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ भनेझैं उनी पुनः इटहरी नै फर्किाए । उनी त्यत्तिखेर अफ्सेट मेसिन अपरेटरको काम गर्थे । यहाँ काम गर्नेक्रममा कुनै पनि प्रकारको उपलब्धि नभएको उनको विगत थियो । र, उपलब्धि नभएपछि धेरै कुरा सोच्न बाध्य भएका थिए उनी ।
त्यसैक्रममा उनले अब भने आफैं केही गर्ने सोच बनाए । उनले आफ्नो योजनाअनुसार साथीभाइमाझ पनि कुरा राखे । त्यसक्रममा उनले केही आफ्नो रकम र केही आफन्तको सहयोगमा साझेदारीमा एक व्यवसाय सञ्चालन गरे । उनले यो व्यवसाय इटहरीबाट सुरु गरेका थिए । व्यवसाय साझेदारी भए पनि उनले काम भने एक्लै गर्थे । साथीको लगानी मात्र थियो ।
नरेशले व्यवसाय एक्लै सम्हालेकाले हाल २० देखि २५ हजारसम्म रकम भने उनले तलब भनेर छुट्याएका छन् । धेरै समयको अन्तरालमा उनले आफूलाई धेरै नै सफल भएको अनुभूत गरेका छन् । अन्ततः पहिला अरूकहाँ काम गर्ने नरेश अहिले अरूलाई काम दिने भएका छन् ।
नरेशको कार्यालयमा अहिले ८ जनाले रोजगारी पाएका छन् । आफूमा कहिल्यै पनि विदेश जाने सोच नआएको उनी बताउँछन् । त्यत्ति मात्रै हैन, उनले त अरूलाई पनि विदेश नजान सुझाव दिएका छन् । अरूको देशमा गएर १२ देखि १४ घन्टा काम गरेर पैसा कमाउनुभन्दा आफ्नै देशमा त्यत्ति समय काम गर्दा राम्रो आम्दानी हुने नरेशको बुझाइ छ ।
नरेशले हाल ४० देखि ५० हजारसम्म मासिक कमाइ गर्छन् । उनले भने, ‘पहिले जागिर गर्दा दुःख थियो, अहिले जागिर दिँदा सुख छ ।’
पहिला मजदुर, अहिले रोजगारदाता was last modified: December 23rd, 2017 by Purbi Bazar
इटहरीको बधशालाको फोहोर खोलामा !
तीन कुरालाई सरकार !
भोट माग्दा पुलको बाचा, अरू बेला चुप...
जेसिज सिकाइका लागि विश्वविद्यालय हो : महेश...
मोरङमा महिला उम्मेदवार १० प्रतिशतभन्दा कम
कन्यामको विशेषता बन्दै घोडसवारी
जलयात्रा व्यवसायीक बनाउनु पर्छः हिक्मत कार्की
सिएफएल छानबिन प्रतिवेदन अपूर्ण छ ः कार्यकारी...
‘केराबारीलाई दोस्रो धरान बनाउँछु’
विराटचौक मोरङको वैकल्पिक सहर बन्दै
इलामका २ प्रतिनिधी र ३ प्रदेशभा बाम...
भारतमा उच्च माग हुँदा अम्लिसोको निर्यात हरेक वर्ष बढ्दै
इटहरी उपमहानगरमा भ्रष्टकर्मचारीलाई ६ महिनामा जेल हाल्छु ः नवनिर्वाचित मेयर
पूर्वमा सिअाइबीकाे छापाः इटहरीका वडा सचिवसहित चार पक्राउ, धरानमा एक दम्पती पक्राउ
मेयर पदको उम्मेदवार छनौटमा इटहरीका कांग्रेस कार्याकर्ता आक्रोशित
जे.पी. मिडिया प्रालिद्धारा संचालित पूर्वको पहिलो आर्थिक डिजिटल पत्रिका
सम्पादक: प्रेम बास्तोला
सम्पर्क: ०२५-५८३१७१ || ९८४२०३७४०२
Tweets by purbibazar
@2017 - Purbi Bazar. All Right Reserved.